Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada ogadeniya ee JOKA oo shirkii joogtada u ahaa isugu timid
Jaaliyada ogadeniya ee JOKA oo shirkii joogtada u ahaa isugu timid
Jaaliyada S.Ogadeniya ee Koonfur Afrika (JOKA) xubnaha xarunta dhexe ee gobolka Eastern cape ayaa maanta shir aad u qiimo badan isugu imaaday. Shirkan ayaa ahaa shirkii caadiga ahaa ee 2bilood-laha ahaa.
Waxaa shirka oo lagu qabatay hall ka weyn ee mouth hall ku yaala magalada UITENHAGE. Shirka ayaa abaarihi 2.duhurnimo waxaa furay gudoomiyiha jaaliyada JOKA Suldaan Cabdi Askar. Gudomiyaha ayaa furitaanka ka dib kusoo dhaweyey hogaanka arimaha diinta iyo dac wada Sh. Mahamed Raabi.
Sheekhu arimaha uu ku dheeraaday waxaa ka mid ahaa in guurka laga dhigo mid fudud oon la dhaqan doorsoomin oo qaabka diinta ilaahay waafaqsan laga dhigo guurka. Waxuu sheekhu sheegay in guurka kharashka badan lagu burburiyaa uuna aqalkaasi dhismin asagoo taa badal keeda xubnaha ka codsaday in halganka ay ugu deeqaan lacagata faraha badan ee lagu burburiyo aroosyada. Dadkii meesha isugu yimid si aad ah ayay u soo dhaweeyeen fikrada Sheekha.
Wacdigii Sheekha ka dib ayuu gudoomiyaha jaaliyadda wuxuu u soo gudbiyey shirka warbixin guud oo ka koobnaa arimaha soo socda;
Gulufka lagu naafeeyey cadowga TPLF 2bilood ee lasoo dhaafay. warbixintaa oo aad loogu dhaga tagayay lagun diirsaday. Siyasada Itoobiya ee jaahawareersan ee talska sii socoda ee TPLF oo ku guul dareystay riyadii ay wateen ee ay ugu talagaleen inay dadka ay gumaytaan inay ku khaldaan oy u maldahaan federal iyo waxay ugu yeedheen kilil oo aan waxba ka jirin. Waxaa kaloo uu ka warbixiyay gudoomiyaha jaaliyadda sida ay siyaasadda Itobiya ugu fashilantay dibadaha ka dib mudaharaadyadii isdaba jooga ahaa ee ugu dabeeyey kii Sweden.
Intaa ka dib ayaa waxaa lagu soo dhaweye Hasen Cabdi aw-Noor oo ah Hogaanka Arimaha Bulshada ee jaaliyadda. Wuxuuna ka waramay wax qabadakii jaaliyada JOKA sanadkii tagay ee 2011. wuxuu sheegay in jaaliyada uu sandkii 2011 ugu dhamaday guulo aan la koobi karin marka la eego koboca dhaqalaha jaaliyadda, tirada iyo tayada jaaliyadda, samrintii dabaqoodhiga 2011 oo gabi ahanba ku fashilmay KA iyo xaga siyaasada wadankan South Africa.
Waxaa hadana lagu soo dhaweeyay halgame Cabdulfataah Xasen oo ka mid ah masuuliyiinta maamulka JOKA. Wuxuna ka hadalay dhoor qodob oo ay kamid yahiin qabyaalada iyo arimaha anshaxa xubnaha oo loo baahanyahy ayuu yidhi in shareecada islmaka lagu dhaqamo.
Intaa ka dib ayaa waxaa loo gudbay qodob doodeed ku saabsanaa dhaqaalaha. Sidii xubnuhu ganacasigooda u mideen lahaayeen shirkadana u samaysan lahayeen iyo ganacasi xoogan oo wax wada qabsi ah.
Ugu damabayntii waxaa lagu dardardaarmay xoojinta halganka iyo xoojinta dagaalka dhinacayada jaaliyadaha kaga aadan. Shirka kan ku xiga ayaa lafilayaa inuu noqodo kalfadhiga ama shirweynaha jaaliyada S.Ogadeniya ee Koonfur Afrika ay isugu imaan doonto bisha March 15.3.201.
OMAR JIGJIGA ONA/SA